1 Tantara 9 - Ny Baiboly
1 Tantara toko 9
Ny mponina tao Jerosalema.
1Voasoratra amin'ny tetiaram-pirazanana avokoa izany Israely rehetra, ka indreto izy voasoratra ao amin'ny bokin'ny mpanjakan'Israely; ary nentin-ko babo tany Babylona Jodà, noho ny fahotany. 2Ny mponina voalohany, nonina tamin'ny taniny, tamin'ny tanànany, dia ny Israelita, ny mpisorona, ny levita, ary ny Natineana.
3Nisy nonina tao Jerosalema ny taranak'i Jodà, ny taranak'i Benjamina, ny taranak'i Efraima, sy Manase, 4ny taranak'i Faresa, zanak'i Jodà: Oteì zanak'i Ammioda, zanak'i Amrì, zanak'i Omraì, zanak'i Bonnì. 5Ny tamin'ny Silonita: Asaia, lahitao sy ny zanany lahy. 6Ny tamin'ny taranak'i Zarà: Jehoela sy ny rahalahiny; sivy folo amby enin-jato izy. 7Ny tamin'ny taranak'i Benjamina: Salao, zanak'i Mosolama, zanak'i Odoià, zanak'i Asàna; 8Jobanià, zanak'i Jerohama; Elà, zanak'i Ozi, zanak'i Mokori; Mosolama, zanak'i Safatià, zanak'i Rahoela, zanak'i Jebanià, 9ary ny rahalahin'izy ireo, araka ny taranany: dia enina amby dimampolo sy sivin-jato. Samy loham-pianakaviana, araka ny fokom-pianakaviany avy, ireo lehilahy rehetra ireo.
10Ny tamin'ny mpisorona: Jedaià, Joiariba, Jakima, 11Azariasa, zanak'i Helkiasa, zanak'i Mosalama, zanak'i Sadaoka, zanak'i Maraiota, zanak'i Akitoba, mpanapaka ny tranon'Andriamanitra; 12Adaiasa, zanak'i Jerohama, zanak'i Fasora, zanak'i Melkiasa; Maasaì zanak'i Adiela, zanak'i Jezrà, zanak'i Mosolama, zanak'i Mosolamita, zanak'i Emmera; 13ary ny rahalahin'izy ireo, izay lohan'ny fokom-pianakaviany avy, dia nisy lehilahy mahery enimpolo sy fiton-jato sy arivo mba hanatanteraka ny fanompoana ao amin'ny tranon'Andriamanitra.
14Ny tamin'ny Levita: Semeià zanak'i Hasoba, zanak'i Ezrikama, zanak'i Hasebià, tamin'ny taranak'i Merarì; 15Bakbakara, Heresa, Galala, Matanià, zanak'i Mikà, zanak'i Zekri, zanak'i Asafa; 16Obdià, zanak'i Semeià, zanak'i Galala, zanak'Iditona; Barakià, zanak'i Asà, zanak'i Elkanà, izay nonina tao an-tanànan'ny Netofatiana.
17Ary ny mpiandry varavarana: Seloma, Akoba, Telmona, Ahimàna, mbamin'ny rahalahin'ireo; Seloma no lehibe, 18ary mbola ao am-bavahadin'ny mpanjaka, eo atsinanana izy mandrak'androany. Ireo no mpiandry varavarana tamin'ny tobin'ny taranak'i Levì. 19Seloma zanak'i Kore, zanak'i Abiasafa, zanak'i Kore, mbamin'ny Koreita rahalahiny amin'ny fianakavian-drainy, no nanao ny raharahan'ny mpiandry ny varavaran'ny tabernakla; ny razan'izy ireo no efa niandry ny vavahadin'ny tobin'ny Tompo. 20Finea zanak'i Eleazara, no mpanapaka azy ireo taloha, ary nomban'ny Tompo izy. 21Zakaria, zanak'i Mosolamia, no mpiandry ny varavaran'ny trano lay fihaonana. 22Roa ambin'ny folo sy roan-jato no isan'ireo olom-boafidy ho mpiandry varavarana ireo. Voasoratra amin'ny vohiny avy izy, ary Davida sy Samoela mpahita no nanendry azy hanao io raharaha io. 23Izy ireo sy ny taranany no tao amin'ny varavaran'ny tranon'ny Tompo, ny tranon'ny tabernakla, mba hiandry azy. 24Nitoetra teo amin'ny lafiny efatra ny mpiandry varavarana, dia teo atsinanana sy andrefana, ary avaratra sy atsimo. 25Ny rahalahin'izy ireo, izay nonina tany amin'ny vohiny, dia tsy maintsy mankeo aminy indraindray, ka maharitra herinandro eo. 26Fa izy efa-dahy lohan'ny mpiandry varavarana, izay Levita, dia teo amin'ny raharahany hatrany, sady mbola nitandrina ny efi-trano sy ny rakitra tao an-tranon'Andriamanitra. 27Nitoetra teo amin'ny manodidina ny tranon'Andriamanitra izay nambenany izy, ka tsy maintsy tandremany ny hamohana azy isa-maraina.
28Ny Levita sasany kosa, nitandrina ny fanaka momba ny fanompoana, ka navoakany sy nampidiriny ireny no sady nisainy koa. 29Ny sasany aminy, nitandrina ny fanaka, dia ny fanaka rehetra teo amin'ny fitoerana masina, mbamin'ny lafarina tsara indrindra, ny divay, ny diloilo, ny emboka, ary ny zava-manitra. 30Nisy zanaky ny mpisorona nangaroharo ny zava-manitra tsara fofona. 31Ny anankiray amin'ny Levita, dia Matatiasa lahimatoan'i Seloma, Koreita, no tonian'ny mofomamy nendasina tamin'ny lapoaly. 32Ary ny rahalahiny sasany, amin'ny taranak'i Kaata, no niadidy ny fanamboarana ho amin'ny isan-tsabata, ny mofo alahatra.
33Ireo no mpihira, lohan'ny fianakavian'ny Levita nitoetra tamin'ny efitrano, afaka tamin'ny raharaha hafa, satria tsy maintsy eo amin'ny raharahany andro aman'alina. 34Ireo no lohan'ny fianakavian'ny Levita, filohany araka ny taranany, ary nonina tao Jerosalema.
35Tao Gabaona no nonenan'i Jehiela, rain'i Gabaona, Maakà no anaran'ny vadiny. 36Ary Abdona no zanany lahimatoa, dia Sora, Kisa, Baala, Nera, Nadaba, 37Gedora, Ahiao, Zakaria, ary Makelota. 38Makelota niteraka an'i Samaana. Nitoetra teo anilan'ny rahalahiny koa izy ireo tao Jerosalema niaraka tamin'ny rahalahiny. 39Nera niteraka an'i Kisa; Kisa niteraka an'i Saola, Saola niteraka an'i Jonatàna, Melkisoì, Abinadaba, ary Esbaala. 40Zanakalahin'i Jonatàna: Meribaala; Meribaala niteraka an'i Mikà, 41Zanakalahin'i Mikà: Fitòna, Meleka, Taraà. 42Akaza niteraka an'i Jarà; Jarà niteraka an'i Alamata, Azmota ary Zamrì; Zamrì niteraka an'i Mosà. 43Mosà niteraka an'i Banaà; Rafaià zanany, Elasà zanany, Asela zanany. 44Nanan-janaka enin-dahy Asela, ka ireto no anarany avy: Ezrikama, Bokrao, Ismaela, Sarià, Obdià, ary Hanàna. Ireo no zanakalahin'i Asela. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0115 seconds